Iindaba-Ukuthetha malunga nokuSebenzisa iZakhono ze-cnc router
Xa sisebenzisa i i-cnc umzila, ayinakuphepheka ukuba asizukuhlangana nomsebenzi othile onengxaki, othatha ixesha kwaye onzima, oxhalabisa kakhulu. Ngapha koko, xa usebenzisai-cnc umzila ukwenza olu hlobo lomsebenzi, kukho izakhono ezithile ezinokulandelwa, kwaye ezi zakhono zinokuwenza ngokupheleleyo umsebenzi wethu usebenze ngakumbi. Ngoku, makhe sifunde izakhono ezimbalwa eziqhelekileyo kunye nathi.
1. Ukukrola iipateni zeplastiki
Kwiipateni zokukrola zeplastiki, ungancamathelisa iteyiphu yokudlulisa ngasemva kwento ekroliweyo, emva koko ucofe icala ngeteyiphu kwiglu yokutshiza engamanzi, emva koko uyincamathelise kumphezulu ongalahlwayo, ukuthintela ukusetyenziswa kwetape enamacala amabini. Ishiya umphezulu ekunzima ukuwucoca.
2. Ukulungiswa kwemifanekiso eqingqiweyo emile ngendlela engaqhelekanga
Kwezo zinto zikroliweyo zinemilo engaqhelekanga, zibonakala zilungiswe ngokuqinileyo phezu komhlaba, kwaye ziya kushukuma ziye ngapha nangapha xa ziphantsi koxinzelelo olusezantsi. Ngeli xesha, ungazama ukubeka inkunkuma phantsi kwento ukwandisa ukungqubana. Enye into kukugcina ukupakisha okuza nento. Nangona into yenziwe ngendlela engaqhelekanga, ukupakisha okukuyo kunokuba yinto eqhelekileyo kwaye kulula ukuyilungisa. Yongeza umtya omncinci ukwenza into emilo engaqhelekanga. Kulula ukulungiswa.
3. Ukulungiswa kwento eqingqiweyo
Kuba oomatshini bokukrola ngomthi bahlala bexhotyiswe ngeplisi okanye imisebenzi emincinci, kwaye zenziwe ngentsimbi, kulula ukwenza umonakalo kwinto ekroliweyo okanye ukuyenza ishenxise ngexesha lenkqubo yokukrola, ke khetha ezinye iirubber okanye iityhubhu zerabha ze Ukulungiswa kwento ebhaliweyo kuya kusombulula olu hlobo lwengxaki kumgangatho othile.